မအေးသောင်း – PAPAWADY
အနုပညာလောကမှာ ဒုတိယအကြိမ်ခြေပြန်ချနိုင်တာဟာ ဖေ့ဘွတ်ခ်ကအမျိုးတွေကြောင့်ပါ
အနုပညာကို ရူးသွပ်သူ ၊ အနုပညာလောကသို့ ဒုတိယအကြိမ်တကျော့ပြန်ခြေချကာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာသူ ၊ ဖေ့ဘွတ်ခ် မှာ မြန်မာဝတ်စုံလှလှလေးတွေတင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့သတိထားအားပေးမှုကိုရရှိလာသူ မအေးသောင်း ဟာ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ကို သူမရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးထားတာကို ပပ၀တီ က ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted in သတင်း, အနုပညာရှင်Tagged မအေးသောင်း
အသက် ၃၄ လား ၊ ၄၃ လားငြင်းခုန်နေမှုအပေါ် မအေးသောင်းရှင်းပြီ
Posted on May 29, 2018 by papawady
၃၄ လား ၄၃ လား ၊ စိတ်ထဲမှာ မရှင်းမရှင်းဖြစ်လို့ ငြင်းခုန်နေကြတဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ အသက်ကိစ္စဟာ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ လူပြောများတဲ့ သတင်းတပုဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မအေးသောင်းကတော့ ပထမ မဖြေရှင်းတော့ဘူးဆိုပေမယ့်အခုတော့ မိဘ တွေကို မယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ ထိခိုက်စော်ကားလာလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းကို အစချီကာ မှတ်ပုံတင်ပုံ ၊ ပတ်စပို့ ပုံတွေကိုတင်ကာရှင်းလင်းရေးသားထားတာကို ပပ၀တီ က ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
မအေးသောင်း က တော့ လွမ်းပဲ လွမ်းနိုင်ပါလွန်းတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ မအေးသောင်း လွမ်းလို့ ပဲပေးပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို ကြည့်ရင်း မအေးသောင်း ဘယ်သူ့ကိုများလွမ်းနေလဲဆိုတာသိချင်မှာပေါ့။ မအေးသောင်း က ပုံတွေနဲ့ အတူရေးထားတဲ့ ကဗျာလည်း ဖတ်ကြည့်ပါဦး ။ ကိုယ့်အတွက်တော့ နွေရာသီမှာလွမ်းတဲ့ အလွမ်းမီးက ပိုတောက်တာပါလေ ဆိုတဲ့စာသားလေးကလည်း မထိဖူးလားလို့ ။ ကဲ ကြွေရင် ကြွေတယ်မန့်သွားနော်။
Posted in ဖက်ရှင်, သတင်း, အနုပညာရှင်Tagged မအေးသောင်း
Posted on April 27, 2018 by papawady
မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ကိုဖမ်းစားထားတဲ့မအေးသောင်းက ဒီနေ့ မှာလည်း ပန်းစီရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်လေးဝတ်ထားပြီး ဓာတ်ပုံတွေတင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မအေးသောင်းက ခြံထဲမှာ စိန်တလုံးသရက်သီးတွေ အများကြီးသီးနေပြီရှင့်။ ဘယ်သူစားမလဲ? ဆိုပြီး မေးထားပါသေးတယ်။မအေးသောင်း က တကယ်ကော ကျွေးမှာလား မေးပေးရမလား မွနျမာဆနျဆနျဝတျစုံလေးတှနေဲ့ပရိသတျရငျကိုဖမျးစားထားတဲ့မအေးသောငျးက ဒီနမှေ့ာလညျး ပနျးစီရောငျ ဖကျရှငျလေးနဲ့မွနျမာဆနျဆနျလေးဝတျထားပွီး ဓာတျပုံတှတေငျထားပါတယျ။ ပွီးတော့ မအေးသောငျးက ခွံထဲမှာ စိနျတလုံးသရကျသီးတှေ အမြားကွီးသီးနပွေီရှငျ့။ ဘယျသူစားမလဲ? ဆိုပွီး မေးထားပါသေးတယျ။မအေးသောငျး က တကယျကော ကြှေးမှာလား မေးပေးရမလား